Ukusakazwa kocauliflower kuvela enzalweni.
Ukuhlwanyela okuqondile kungenziwa ukutshala ama-cauliflowers, nakuba lokhu akuwona umkhuba ovame kakhulu wabalimi bezentengiselwano njengoba lokhu kungenzi izitshalo ezifanelwe kakhulu kanye nezimo zezulu zangaphandle ziyahlukahluka futhi kungabangela ukubambezeleka ekusungulweni. Imbewu yezitshalo 12 mm kuya ku-15 mm ejulile bese uzama ukugcina umfaniswano wokujula wezitshalo ezifanelwe.
Indlela yokuvuna evame kakhulu ukutshala izithombo ze-caulifulawa ezikhulisiwe. Izitshalo zekholifulawa zitshalwe zibe yizimbewu zembewu futhi zigcinwe endlini futhi zikhuliswe ezindlini zokugcina izithombo ngo-20°C kanye nomswakama ophakeme wesikhashana futhi zatshala izinsuku ezingu-30 kuya kwezingu-35 emva kokuhlwanyela lapho ziba ngu-15 cm ubude futhi zenze amaqabunga amahlanu kuya kweziyisithupha.
Ukutshala i-olifulawa ngokuvamile kwenziwa ngesandla, kodwa ezinye zezitshalo ezinkulu zabakhiqizi bezentengiselwano zisebenzisa izitshalo ezihlelekile.
Izimila kufanele zihlukaniswe ngamasentimitha angu-50 emigqeni engama-60 cm. Zama ukuba nezitshalo ezingaba ngu-30 000 ngehektha ngalinye. Abalimi nabo batshale ama-cauliflower emigqeni ye-tram ngomugqa wokufinyelela kancane kancane emigqeni emibili. Imigqa yeTram ingatshalwa ngo-40 cm phakathi kwezitshalo emgqeni bese u-50 cm phakathi kwemigqa kanye no-60 cm kuya ku-100 cm imizila yomsebenzi phakathi kwemigqa yethemu.
Nakuba lena akuyona indlela ethandwa kakhulu yokulima, imbewu yekholifulawa ingatshala ngqo kulo lonke unyaka nje uma izingqimba zokushisa zihlala zingaphezu kuka-15°C. Ungatshali emazingeni okushisa angaphansi kwama-10°C ngoba lokhu kwenza ukuhluma kunzima.
Ukutshala izithombo zekholifulawa kwenziwa unyaka wonke ngaphandle kwezinkathi ezishisayo noma ezibandayo kakhulu noma izindawo. Ngakho iningi laseNingizimu Afrika gwema ukutshala phakathi kukaMeyi naphakathi kuka-Agasti njengomthetho ngenxa yobusika obusika. Hlala izithombo ezifanayo kuphela ezifanayo njengoba lokhu kuzoholela ekukhuleni okufanako kanye nokuvuna okufitjhani.
Ngokuya kokutshala kanye nesimo sezulu ukukhula okuvela ekutshalweni kwezithombo zekholifulawa kuya ekuvuthweni kuphakathi kwamasonto ayisishiyagalombili kuya kwangu-12. Amanye ama-cultivars we-Kolifulawa angakulungiswa ngesikhathi esifushane njengamaviki ayisithupha kusukela ekutshalweni kwezithombo eziqinile kahle uma izimo zilungile.
Umkhuba omuhle ukulandela imihlahlandlela enikezwe ngumeluleki wakho ngokusekelwe emiphumeleni yesampula yakho yomhlabathi kanye nasinconyweni enikeziwe ngohlobo lwesitshalo ozolihlwanyela.
Ukholifulawa uthanda ukutholakala kahle kwezakhi zomzimba futhi isikhathi saso esifushane sokukhula sidinga ukufakwa kwesicelo somanyolo ongaphezulu
Ngaphambi kokutshala kumele usebenzise ama-250 kg ukuya ku-300 kg ngehektha ngalinye le-NPK ingxube njengo-3:1:5 (35) bese usebenza lokhu endaweni yesitshalo. Uma izithombo ezintsha seziqedile, cishe izinsuku eziyishumi emva kokutshala, uhlangothi olugqoke ngama-200 kg ukuya ku-250 kg ehektheleni ngalinye lika-3:1:5 (35) emigqeni yesitshalo bese unisela emhlabathini.
Phinda lokhu ezinsukwini ezingu-18 kuya kwezingu-21 emva kokutshala futhi futhi ezinsukwini ezingaba ngu-30 kuya kwezingu-35 ngemuva kokutshala. Lokhu kufanele kube nokwanele ukuthi isivuno sikhule. Amaqabunga ama-oliflower kufanele abe aluhlaza obumnyama futhi uma izibonakaliso ezinamaqabunga aluhlaza noma amaqabunga aphuzi zibonakalisa lokhu kungase kudingeke ukuthi kwenziwe isicelo esengeziwe.
Qinisekisa ukuthi inhlabathi iniselwa ngaphambi kokutshala ukholifulawa futhi emva kokutshala izitshalo ezincane ukuhlala kahle. Ungapheli ukuchelela njengoba lokhu kungase kufike izakhi zokuqala ezisetshenziselwa izimpande zezitshalo ezintsha. Ngokuba lokhu cishe ngo-10 mm ngosuku ngaphambi kokuphindaphindiwe u-10 mm emva kokutshala kufanele kube khona.
Ngemva kwalokho ama-15 mm kuya ku-20 mm ngeviki emasontweni amabili okuqala bese ephakathi kwama-25 mm kuya ku-30 ​​mm ngesonto ngaphandle uma izinga lokushisa liphakeme, lokhu kungakhuphuka kube ngu-35 mm ukuya ku-45 mm ngesonto.